Semalt: Hlala Ukhuselekile Kwizinto Eziyingozi Ukuzenza Ngezixhobo Ze-WordPress ezihambelanayo
Sivame ukuva malunga neewebhusayithi ezijoliswe ngabacuki kunye nogaxekile. Uninzi lwabaphathi bewebhu baqikelela ukuba ukuba akukho datha yokweba ezifana neenkcukacha zekhadi lesikweletu okanye ulwazi lwebhanki, ukuphazamisa amaziko abo akunandaba. Ngelishwa, ziphosakele njengokuba abahlaseli banokwenza izinto ezininzi ngeendawo zabo ze-WordPress - vape o rings.
Izinto eziphambili ezihlaselayo okanye abagaxekile abanokuyenza ngeziko lakho zichazwe ngezantsi nguRyan Johnson, ingcali ehamba phambili ye-12 (Semalt .
Iziza ezifihliweyo kwaye zizithathele ngaphandle:
Ngokuqhelekileyo, abahlaseli okanye abagaxekile bathatha indawo yewebhu kunye namanqaku ngokwabo. Ngokomzekelo, ezinye zewebhusayithi zeendaba zihlaselwa, kwaye umxholo wabo wezopolitiko uthathe indawo yamanqaku anxulumene nobugandaganda. Abagculeli baqhayisa nje ukuba bahlasele iziza zakho kwaye awukwazi ukwenza nto ukuyifihla into abayenzayo. Nabani na oya kutyelela indawo yakho uya kukwazi ukuba isayithi lakho likhishwe. Umzekelo wesayithi echasiweyo yi-opennet.net. Kubaxhasi abatshintsha umxholo wakho nge propaganda, iwebhusayithi yakho yindawo yokwenza isikhangiso samahhala.
Abahlaseli baqhubeka bethumela ii-imeyli ze-spam kwinani elikhulu labantu basebenzisa ulwazi lwakho, njengamagama abasebenzisi okanye amaphasiwedi. I-Statistica ibonisa ukuba i-54% yazo zonke ii-imeyile ezithunyelwe okanye ezifunyenwe zizigaxekile..Olunye uhlolo lwengxelo lubonisa ukuba abahlaseli badibanisa kwiindawo ezininzi ze-WordPress kwaye basebenzise ukuthumela ii-imeyli ze-spam kubaninzi babasebenzisi imihla ngemihla. Kwiimeko ezininzi, ii-webmasters abazi nokuba iindawo zabo ziye zatshitshiswa ngabahlaseli. Baya kuphawula ukuba iiwebhusayithi ziyancipha kwaye iipikhi kwiseva ziye zaba yingxaki efanayo. Abahlaseli bafumana ezi zimbini iingeniso eziphambili kule nto: okokuqala, basebenzisa izibonelelo zeseva yakho ngaphandle kwentlawulo. Okwesibini, bayonakalisa idumela lakho kwi-intanethi kwaye banokutshabalalisa indawo yakho kwisimo se-injini yokusesha.
Abahlaseli okanye abagaxekile babandakanyeka kwimisebenzi enobungozi. Ukubuyiselwa okusebenzayo kubenzela ukuba baqhube i-traffic kwiindawo ezahlukeneyo ezinobungozi nezingozi. Abasebenzisi abazi nokuba oku kwenzeka kubo, kwaye kuyinto evamile xa iintengiso zakho zingabonakali kakuhle. Abahlaseli basebenzise ithuba lokubuyisela kwaye bathumele i-traffic eliphezulu kwiiwebhsayithi zabo. Injongo yabo kukuphucula i-rankings injini ye-injini kunye nokusabalalisa umxholo onobungozi kwi-intanethi.
Ukusingatha Amaphepha aPhepha:
Abahlaseli basebenzisa amaqhinga obuqhetseba ukukhohlisa abavakashi ukuba banikezele ngolwazi oluzimeleyo okanye olubukhali. Ngokuqhelekileyo, bazenza iibhanki okanye abathengisi kwaye bazame ukusinika ulwazi olunjengamagama abasebenzisi kunye namaphasiwedi. Baye beba zethu iinkcukacha zekhadi lokuthenga ngetyala ngokusebenzisa ezo maphepha ezinobungozi. Abaxhasi bathabatha ulwazi oluninzi malunga nesayithi elidumileyo leWePress, kwaye umzekelo wephepha lokuphangelwa yi-eff.org.
I-Ransomware yinkqubo enobungozi engavimbela ukufikelela kwisiza sakho kwaye ifuna ukuba uhlawule intlawulelo ukuba ufuna ukufumana ukubuyiswa. Abahlaseli basebenzisa i-ransomware njengendlela yokufumana, kwaye ihlasela ezininzi iiwebhu kunye neeblogi. Ukukhusela ukuhlaselwa kwe-ransomware, kufuneka ube neenkcukacha zeefayile zakho. Ukuba unayo iifayile zokulondoloza, kufuneka uhlawule intlawulelo kubagculi njengoko bengakuvumeli ukuba usebenzise indawo yakho ye-WordPress kwiinjongo zoshishino.
Kungakhathaliseki ukuba uluphi uhlobo lwezoshishino ozenzayo kunye nendlela enokufumana ngayo indawo yakho ye-WordPress, abahlaseli okanye abahlaseli banokukwazi ukubona indlela yokusebenzisa iphepha lakho lewebhu ngezizathu zakho.